किन केही महिलाहरुले कोविड-१९ विरामीलाई प्लाज्मा दान गर्नमिल्दैन
Published 29 October 2020 1 min read
कोविड-१९ को संक्रमणबाट निको भएका व्यक्तिहरुमा संक्रमणसँग लड्ने समयमा रगतमा कनभ्यालेसेन्ट प्लाज्मा नामक एन्टीबडी बोकेको तरल पदार्थ निर्माण हुनेगर्छ। भाईरल इन्फेक्सनबाट ग्रस्त व्यक्तिहरुको उपचारमा यस्को प्रयोग हुन्छ जस्लाई प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ।
प्राय: कोविड जितेका व्यक्तिले प्लाज्मा दान गर्ने गरेको सुनिए पनि, दान गर्नुपूर्व केही सर्तहरु पुरा भएको हुनुपर्दछ, अर्थात सबै कोरोना जितेका व्यक्तिले प्लाज्मा दान गर्न मिल्दैन। सोही मापदण्ड मध्य एउटा हो : एकपटक गर्ववती भईसकेकी महिला।
किन गर्भवती महिलाले प्लाज्मा दान गर्न मिल्दैन ?
स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार, महिलाहरुमा गर्भवती अवस्थामा नै एन्टिबडीको विकास भएको हुन्छ। पिताको जेनेटिक तत्वका लागि गर्भवतीमा ह्युमन लिउकोसाइट एन्टिजेन (Human Leucocyte Antigens-HLA) नामक एन्टीबडीको विकास भएको हुन्छ। अझ सफल गर्भाधानको मात्रा सँगै ह्युमन लिउकोसाइट एन्टिजेन(HLA) को मात्रा पनि बढ्दै जाने गर्दछ।
एक पटक यो एन्टिजेन(HLA)को विकास भईसके पश्चात सदाका लागी रगतमा रइरहनेगर्छ। यसरी विकास भएका HLA एन्टिबडीहरु शरीर(निर्माण हुने)का लागि कुनै पनि रूपमा हानीकारक हुँदैन, तर अन्य शरीरमा ट्रान्स्फ्युज गर्दा भने ट्रान्स्फ्युज गरिएको व्यक्तिमा गम्भीर जटिलताहरु देखिने सम्भावना रहन्छ, फोक्सोमा हानी (Transfusion-Related Acute Lung Injury (TRALI) निम्त्याउन सक्दछ।
सामान्यतया कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको भाइरसका कारण फोक्सो कम्जोर हुने गर्दछ र सो अवस्थामा गर्भवती भईसकेका महिलाको प्लास्मा ट्रान्स्फ्युज गर्दा निकै घातक सिद्ध हुने सम्भावना रहन्छ।
यि व्यक्तिको पनि प्लाज्मा दान गर्न मिल्दैन
कोरोना भाईरसबाट निको भईसकेको १४ दिन पछी मात्र प्लाज्मा दान गर्न योग्य हुन्छ अन्यथा मिल्दैन। त्यसैगरी दान दिने व्यक्ति कम्तीमा १८ वर्ष र बढीमा ६० वर्ष उमेरको हुन जरुरी छ। त्यस्तै दान गर्ने व्यक्तिको तौल कम्तीमा ५० के.जि. को, हेमोग्लोविनको मात्रा कम्तीमा ८ हुन जरुरी छ। त्यस्तै किडनी, मुटु वा फोक्सो सम्बन्धी कुनै समस्या, डायबेटिजको विमारी हुनुहुन्न।
यती मात्र हैन क्यान्सरबाट मुक्त भईसकेका व्यक्तिहरु पनि प्लाज्मा दान गर्न योग्य मानिदैनन्। त्यस्तै दान गर्ने व्यक्तिको रक्तचाप १४० भन्दा धेरै हुन नहुने र डायस्टोलिक चाप ६० भन्दा ज्यादा र ९० भन्दा कम हुनु अर्को महत्वपूर्ण योग्यता हो।
सामान्यतया हामी सबैको शरीरमा एन्टीबडी बनेर नै रोगसँग लड्न सकिने हो तर यो हाम्रो शरीरमा बन्नका लागि भने हप्तौँ लाग्नेगर्छ। हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता तयार नहुन्जेल सम्ममा ट्रान्स्फ्युज गरिएको एन्टीबडीले रोगसँग लड्न मद्दत पुर्याउदै गर्छ भनेर यो उपचार बिधी अपनाउने गरिन्छ।
सन १९१८ मा फ्लुको माहामारीको समयमा पनि बिरामीहरुमा प्लाज्मा थेरापीको उपचार पद्दती प्रयोग गरिएको थियो।